၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလတွင်စတင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း။ ကုန်သွယ်ရန်သင်ယူပါ
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းကိုရှာပါ။ စတော့ရှယ်ယာ နှင့် ရှယ်ယာများ၊ Forex၊ ကုန်စည်အတိုးနှုန်းများ၊ သို့မဟုတ် cryptocurrencies - သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို သင်ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရာနှင့်ချီသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများသည် ယခု UK စျေးကွက်တွင် လှုပ်ရှားနေသဖြင့် မည်သည့်ပွဲစားကို ရွေးချယ်ရမည်ကို သိရှိခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
UK ပွဲစားများအနေဖြင့် ထိန်းညှိပေးရမည်။ FCA
ထို့ကြောင့်၊ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများသည်သင်မှာယူမှုတိုင်းပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းသင်အားအခကြေးငွေ ပေး၍ ငွေရှာသည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်သင်၏အမှာစာပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်သည့်ကော်မရှင်ပုံစံဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်လည်းငွေမှငွေရှာသည် ပျံ့နှံ့.
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည့် တူရိယာအမျိုးအစားများကို ကြည့်သောအခါတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အခက်နှစ်ခုရှိပါသည်။ CFDs နှင့် Forex ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အရည်အများဆုံးကုန်သွယ်အတွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ. GBP သည် USD နှင့် ယှဉ်ပါက တန်ဖိုးတက်လာမည်ဟု သင်ယူဆပါက ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် GBP သည် ငွေကြေးအတွဲ၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် USD သည် GBP နှင့် ယှဉ်လျှင် USD တန်ဖိုးတက်လာမည်ဟု သင်ယူဆပါက၊ USD သည် အတွဲ၏ ညာဖက်ခြမ်းတွင် ရှိနေသောကြောင့် သင်သည် ရောင်းအမှာစာတစ်ခု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် ရန်ပုံငွေများကို ချက်ခြင်းအပ်နှံရန် ရှာဖွေနေပါက ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်များ သို့မဟုတ် e-wallet ကဲ့သို့သော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို ရွေးချယ်ပါ။ PayPal က or Skrill.